Market Research Association - Page2of7- Market Research Association
National Export Strategy of the Ministry of Commerce was launched in 2015 and it is being developed for the next five years 2020-2025. The Vision is Sustainable Export led Growth and Prosperity for Emerging Myanmar. In the new strategy,
Continue reading “MRA supports National Export Strategy 2020-2025”
The Myanmar Living Conditions Survey 2017 (MLCS 2017) Socio-economic report was launched on7February 2020. MLCS 2017 isacomprehensive household survey conducted by Myanmar’s Central Statistical Organization of the Ministry of Planning, Finance and Industry. The survey is representative of the Union, its states/regions and the Union Territory of Nay Pyi Taw, and urban and rural areas.
Continue reading “Myanmar Living Conditions Survey 2017 : Socio-Economic Report (English)”
ဈေးကွက်သုတေသနအသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
ဈေးကွက်သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ၁၃ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို MMRD Office, 8th floor တွင် (၁၇.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသို့ အသင်း၏ ဥက္ကဌဦးမိုးကျော်(MMRD)၊ ဒုတိယဥက္ကဌ(၁) ဦးကျော်လှိုင်(MSR)၊ ဒုဥက္ကဌ(၂) ဦးသူရိန်ငြိမ်း(Myanmar Resources Network)၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မင်း(MMRD)၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချောစုဝင်း(Neo Prospect)၊
Continue reading “ဈေးကွက်သုတေသနအသင်း(ရန်ကုန်)၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး”
World Bank Myanmar Economic Monitor: Resilience Amidst Risk
World Bank Myanmar launched Myanmar Economic Monitor Report December 2019 on 14 January 2020. Myanmar’s economy continues to show resilience despite the global slowdown and domestic uncertainties.
Continue reading “World Bank Myanmar Economic Monitor: Resilience Amidst Risk”
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကုန်လွန်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရောက်တဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ဟောင်းရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သစ်ရဲ့ အလားအလာကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပေးလိုပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် စီးပွားရေးအခြေအနေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း အလွန်အမင်း မြင့်တက်ပြီး၊ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၃၀ % ကျဆင်းကာ စီးပွားရေး မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ စီးပွားရေး အနည်းငယ် တည်ငြိမ်သယောင် ရှိပေမယ့် အကျမှာ ရှိနေပါတယ်။
Continue reading “၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာ”
Market Research Association (Yangon) 3rd Annual General Meeting
Market Research Association (Yangon) Third Annual General Meeting 2022 March 3
MRA 3rd Annual Meeting ( U Kyaw Hlaing - Chairman )
MRA 3rd Annual Meeting (U Thurain Nyein Vice Chairman - 1 )
MRA 3rd Annual Meeting (U Aung Min Vice Chairman -2)
MRA 3rd Annual Meeting (ESOMAR representative )
MRA 3rd Annual Meeting (U Kyaw Soe Moe - Secretary)
MRA 3rd Annual Meeting (Daw Mi May Phyu Phyu Sin - Joint Secretary 1 )
MRA 3rd Annual Meeting (Daw Sabei Aung - Joint Secretary2)